गजेन्द्र मोक्ष - विकिपिडिया
गजेन्द्र मोक्ष (संस्कृत: गजेन्द्रमोक्षः) भगवतपुराणको ८ औँ स्कंदा देखि पुरातन पौराणिक कथा, हिंदू धर्ममा सबै भन्दा पवित्र पुस्तकहरु मध्ये एक छ। यो भगवान विष्णुको प्रसिद्ध कथा मध्ये एक हो। यस उपाख्यानमा विष्णु गजेन्द्रको रक्षा गर्न पृथ्वीमा पुग्यो। त्यसपछि गजेन्द्रलाई भगवान (सरस्वती मुक्ति) जस्तो एक रूप प्राप्त गरे र विष्णुसँग बैकुण्ठ गए।
यो कथा सम्राट परिक्षितको अनुरोधमा श्री सुकद्वारा वर्णन गरिएको थियो।
वाडाला मूर्तिकला, गजेन्द्रको हाथीबाट दशवतारका मन्दिर
१ उपन्यासको कथानक
उपन्यासको कथानक[सम्पादन गर्ने]
त्यहाँ एकपटक एउटा गृजनागर नामक एक हफ्ते थियो जो ऋतुमत् भनिने बगैचामा बस्न जो वरुण द्वारा बनाईएको थियो। गजेन्द्रले समूहको अन्य सबै हात्तीमाथि शासन गरे।अचानक, पोखरामा बस्ने एक गोहीले गजेन्द्रलाई आक्रमण गरे र उनलाई पकड्यो । गोहीको आक्रमणबाट बचाउन लामो समयसम्म गजेन्द्रले प्रयास गरे। तिनको परिवारका सदस्यहरू, नातेदारहरू र साथीहरू तिनलाई मदत गर्न चारैतिर भेला थिए तर व्यर्थमा। जब उनीहरूले 'मृत्यु' गजेन्द्र नजिक आइपुग्दा उनीहरूले गजेन्द्रलाई एक्लै छोडे।
यसै अध्यायको श्लोक ९–१३ सम्म स्वर्गमा त्रिकुट पर्वतको फेदी (घाँटी) मा ऋतुमत् नामको बगैँंचा थियो । देवीदेवताको क्रिडास्थल रहेको उक्त बगैँचा भगवानका महान् भक्त वरुण देवताको थियो । हे राजन ! विधिको विधान अचम्मको छ, गजराज अत्यन्तै बलशाली हुँदा पनि आफ्नो बासस्थानमा हात्तीको बथानले गरेका क्रियाकलापका कारण गजेन्द्रप्रति क्रुद्ध गोहीले उनको खुट्टा पक्रेर आक्रमण गर्यो । यस्तो दुर्दशाबाट छुटकारा पाउनका लागि गजेन्द्रले भरमग्दुर प्रयत्न गरे।
उहाँको भक्तको प्रार्थना सुनेर, विष्णुले दृश्यमा गए । गजेन्द्रले भगवान आउँदै गरेको देखे, उनले आफ्नो सुँडले कमल उठाए। यो हेर्दा, विष्णु खुसी भए र उनको सुदर्शन चक्रले गोहीलाई पराजित गरे।
यस अवसरमा गजेन्द्रले गरेको प्रार्थनाले विष्णु को गजेन्द्र स्तुति भनिने प्रशंसा गरेको एक प्रसिद्ध भजन थियो।
यस श्लोकको तात्पर्य हुन्छ– शुकदेव गोस्वामीले भन्नुभयो– हे राजन् ! त्रिकुट नामको एक विशाल पर्वत छ । यो दश हजार योजन अर्थात ८० हजार माइल अग्लो छ । यस पर्वतलाई चारैतिरबाट क्षीरसागरद्वारा घेरिएका हुनाले यो अत्यन्तै रमणीय छ । फलाम, चाँदी र सुनले बनेका तीन प्रमुख शृङ्खलाले चारै दिशा र आकाशलाई सुन्दरता प्रदान गरेका छन् भन्ने अध्याय दुईको श्लोक दुईमा उल्लेख छ ।
पूर्वजन्ममा गजेन्द्र भगवान् विष्णुका महान् भक्त थिए । उनी दक्षिण भारतको तामिल (द्रविड) राज्यका राजा थिए र उनको नाम इन्द्रद्युम्न थियो । राजकाज त्यागेर उनी मलयाचल पहाडमा कुटी बनाएर भगवानको नित्य पूजा गर्न थाले । एकदिन आफ्ना शिष्यसहित अगस्त्य मुनि कुटीमा आउँदा भगवान्को ध्यानमा तल्लीन भएका कारण राजाले ऋषिको उचित स्याहार सत्कार गर्न सकेनन् । अतःएवं मुनि क्रुद्ध भएर राजालाई आलसी हात्ती बन्ने श्राप दिए । उक्त श्रापका कारण राजा इन्द्रद्युम्न नै गजेन्द्र हात्ती बनेका थिए ।
राजालाई ऋषिद्वारा श्राप दिलाएर आफ्नो अनन्य भक्तलाई आफ्नो धाममा फिर्ता बोलाउने भगवानको योजनामुताविक नै यो घटना भएको सन्त, मुनि र आचार्यको तर्क छ । गजेन्द्रले भगवानको स्तुति गरेका कारण भगवत्कृपा प्राप्त भयो । श्री शुकदेव गोस्वामीले गजेन्द्रमोक्षको कथा सुन्ने र बिहानको समयमा स्मरणमात्र गर्नाले मानिसको पनि भवसागरबाट उद्धार हुन्छ भन्दै यो अध्यायको समापन गर्नुभयो ।
यो विश्वास भएको छ कि यो घटना कबिस्थलममा भएको थियो, जहाँ गजेन्द्र वराहा मन्दिर छ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=गजेन्द्र_मोक्ष&oldid=924248" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २१:०७, १६ सेप्टेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।